Inona no mahatonga ny paikady mahomby amin'ny backlink?
Raha ny momba ny fizotry ny Search Engine Optimization (SEO), ny rohy momba ny fitrandrahana organika dia anisan'ireo fotodrafitrasa fototra ampiasain'ny Google mba hamaritana ny toeran'ny làlana rehetra ao amin'ny SERPs. Izany no mahatonga ny fampiharana paikady ho an'ny daholobe ho an'ny daholobe mahakasika ny fivoarana marina amin'ny fampiroboroboana tsara kokoa amin'ny aterineto noho ny antony hafa. Raha heverina fa mihoatra ny 200 ny isan'ny mpitsoa-ponenana notaterin'ny tondrozotra maimaim-poana an'izao tontolo izao, amin'izao fotoana izao, ny fanambarana momba ny maha-zava-dehibe ny lamosina avo lenta dia tena saro-bidy, sa tsy izany? Mazava ho azy, ny fananana paikady haingam-pandeha haingana sy tsotra dia mety tsy ampy hanome anao rohy ambany - detalles con fotografias de modelos. Ary midika izany fa ny mpamily fiasa lehibe (toa an'i Google, sy Yahoo, na Bing) dia hamoaka ny tranokalanao na ny blôginao hidina amin'ny lisitry ny SERPs. Fa inona no mahatonga ny tetikady fanorenana rindrambaiko mahomby? Mino aho fa ny paikadin'ny backlink dia mety ho lasa iray mahomby amin'ny fampiasana ny herin'ny fampahalalam-baovao nahazoanao.
Ny tanjona mahomby
Tsy ilaina ny milaza fa raha jerena ny fananganana rohy, tsy ny tranonkala na ny bilaogy rehetra dia mitovy ny hanome ny mari-pamantarana mahery vaika ny motera fikarohana. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny olona te-hifandray bebe kokoa amin'ireo loharanom-baovao manana fahefana matanjaka amin'ny sehatry ny pejy, ny fahefana momba ny sehatra, ary PageRank. Noho izany, ahoana no ahazoana antoka fa ny paikadin'ny backlinks dia ampy tsara hiorina amin'ny loharano azo antoka amin'ny rohy mankany anaty? Amin'ny alàlan'ny fanamafisana azy sy ny toetrany amin'ny tanjona tsara. Ao anatin'ireo tahiry media hafa, manoro hevitra an'i Cision aho mba hikorontana ireo tranonkala mahazatra mifandraika amin'ny indostria na ny orinasa fivarotana. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hanasivana ny mpilatsaka hofidiana rehetra ianao amin'ny fidirana amin'ny rindranasa isan-karazany amin'ny orinasa, ny vohikalany, ny haben'ny mpijery, ireo mari-pankasitrahana ankehitriny, ireo fijoroana vavolombelona, ​​sns.
Fantatrao ve fa ny fanorenana ny paikadin'ny backlink manodidina ny mpitaingina goavam-be ao amin'ny indostria na ny tsena nerika dia afaka manampy anao hanorina fitokisana mafy? Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ny mety ho mpanjifanao mety dia mety hitombo kokoa amin'ny tena mpividy, rehefa voatonona ny tranonkalanao na mifandray amin'ny loharano fahatokisana sy manam-pahefana. Ambonin'izany - ny fampiasana ny "vola azo" dia mahery lavitra noho ny fandrakofan'ny media rehetra. Alao sary an-tsaina fotsiny - ny fampahalalam-baovao azo itokisana dia iray amin'ireo singa fototra manana ny fiantraikany mafy amin'ny mpihaino anao amin'ny fanapahan-kevitra mbola tsy voavolavola.
Get Media ahazoana
Tsy sahiran-tsaina toy ny mety hiheveranao hevitra momba ny fampitam-baovao mahaliana. Raha ny marina dia tsy hisy ny ezaka nentim-paharazana nentim-paharazana nilaina nandritra ny fandrakofan'ny media, farafaharatsiny mba hamolavolana paikady mahomby. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny fahafahana miditra sy ny fahafahana mamaly ny fahafaha mahazo media ahafahana mahazo mediam-bahoaka, izay matetika no atrehin'ny mpanao gazety. Amin'izany dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana fitaovana an-tserasera toy ny HARO ("Manampia Mpanao Reportera"), ary ProfNet koa - nahita azy ireo tsara ho an'ny blaogiko vao haingana sy roa tetikasa. Miantefa fotsiny amin'ireo tranonkala ireo ary manjary manana fahefana ao amin'ny orinasa na orinasa fivarotana - mandray ny fangatahana isan'andro avy amin'ireo mpilalao ambony indrindra mitady ireo mpitsabo mba ho tafatafa na tafiditra ao amin'ny tantara malaza indrindra, ary mahazo rohy sasany ho an'ny pejy ho an'ny PageRank ho an'izany.